Tuesday October 29, 2019 - 18:29:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib markii uu sii xoogeystay kacdoonka Shacbiga ah ee wadanka Lubnaan ayay iscasishay xukuumaddii wadankaasi ka jirtay.
R/wasaarihii Lubnaan Sacad Al Xariiri iyo dhammaan golihii Wasiirrada ayaa ku dhawaaqay in ay iska casileen xilalkii ay hayeen sababa laxiriira shacabka Kacdoonka wada oo xiray dhammaan waddooyinka waaweyn ee magaalada Caasimadda ah ee Beyruut.
Al Xariiri ayaa warqadda iscasilaadiisa udhiibay Miishaal Cown oo ah madaxweynaha Kirishtaanka ah ee wadanka Lubnaan, kumanaan kun oo shacab ah ayaa maalintii 13aad taagan waddooyinka labada magaalo ee wadanka ugu waaweyn.
Wariyaal ku sugan Lubnaan ayaa sheegaya in is casilaadda Al Xariiri kadib ay adkaan doonto sida loosoo dhisayo xukuumad lagu midaysanyahay, Ururka Shiiciga Xisbullaah oo ah awoodda koowaad ee wadanka ayaa ku dadaali doona sidii uu heli lahaa xilalka ugu muhiimsan ee xukuumadda soo socota.
Kacdoonka shacbiga Lubnaan ayaa bilaawday kadib markii ay dowladda Lubnaan tariifo ama canshuur kusoo rogtay baraha bulshada arrinkaas oo ka caraysiiyay shacabka oo markii hore ka sheeganaya dib udhac dhanka dhaqaalaha ah oo wadanka ku habsaday.
Wasiirrada iyo xildhibaanada Dowladda oo loo diiday in ay ilaaladooda lagalaan Madaxtooyada.
Diyaaradaha Yahuudda oo duqeymo ka gaystay Suuriya, Ciraaq iyo Lubnaan.